‘संशोधनवादी र संसदवादबाट यो दुनियाँमा वैज्ञानिक समाजवाद कहिल्यै आएको छैन : विप्लव, महासचिव::Dang news portal
‘संशोधनवादी र संसदवादबाट यो दुनियाँमा वैज्ञानिक समाजवाद कहिल्यै आएको छैन : विप्लव, महासचिव
प्रकाशित मिति : मङ्ल, माघ ९, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव त भएरै छाड्यो नि ? कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
हो चुनाव भयो तर संसदीय चुनाव नेपालको स्वाधीनता, शान्ति र समृद्धिको निकास वा समाधान होइन भन्ने पनि साबित भइछाड्यो । काङ्ग्रेस, एमाले—माकेलगायत संसद्वादी, संशोधनवादी, आत्मसमर्पणवादीहरूले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पूरा भएको, क्रान्ति आवश्यक नभएको, अब शान्ति, आर्थिक विकास र समृद्धिको समय आएको नारा फलाकेका थिए तर त्यसलाई हाम्रो पार्टीको अगुवाइमा नेपाली श्रमिक र स्वाधीनताप्रेमी जनताले खारेज गरिदिए । केही मुट्ठीभर दलाल, मालिक, सुदखोर, तस्कर, संसद्वादीहरूका लागि त राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक नहोला तर नेपाली जनताले भने आफ्नो मुक्ति र देशको स्वाधीनताका लागि पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिए । साथै खारेजबाट हाम्रो देश स्वाधीनता, मुक्ति र परिवर्तनका लागि प्रतिरोध, विद्रोह र क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सन्देश गएको छ ।
तपाईंहरूको पार्टीले यो चुनाव अस्वीकार गरेको थियो । खारेज नै गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको थियो तर….!
सही हो हामीले अस्वीकार र खारेज गर्ने भनेका थियौँ र त्यो आफ्नो मौलिकता र विशेषतासहित सानदार ढङ्गले सफल भएको छ । नेपालमा जब शान्तिप्रक्रियालाई साम्राज्यवादीहरूको योजनामा नेपाली दलालहरूद्वारा असफल बनाइयो तबदेखि नै हाम्रो पार्टीले जनयुद्धलाई समाप्त पार्न खोज्ने दलाल र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह गर्दैै उनीहरूले लाद्न चाहेका सबै संसदीय प्रक्रियाहरूलाई अस्वीकार गरिदियौँ । हामीले अस्वीकार मात्र गरेनौँ अपितु समानान्तर कार्यहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढायौँ । उनीहरूले जनमुक्ति सेना विघटन गर्ने निर्णय गरे, हतियार बुझाउने निर्णय गरे हामीले त्यसलाई मानेनौँ । जनमुक्ति सेनालाई आफ्नै तरिकाले बचायौँ । उनीहरूले संसदीय संविधान घोषणा गरे, हामीले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै जनताको संविधानको खाका घोषणा गर्‍यौँ । उनीहरूको सत्ता र सरकारविरुद्ध हामीले जनताको सरकार र जनप्रतिनिधिसभा निर्माण गर्‍यौँ । यसबेला नेपालमा दुई सत्ता, दुई सरकार, दुई प्रतिनिधिसभा र दुई अदालतको अवस्था छ । त्यसैको उच्च निरन्तरता हो चुनाव खारेज अभियान । उनीहरूले जति नै आत्मरति गरे पनि नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्था अस्वीकृत भएको छ र यो सफल हुनेछैन ।
चुनाव खारेज अभियानमा सयौँ नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । पार्टी पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत समातिनुभयो । यसबारेमा के सोच्नुभएको छ ?
हो उनीहरूले यो चुनाव बन्दुकको नालमा राखेर गरे । यद्यपि सेना र प्रहरीलाई पनि चुनावमा खतरा मोल्न खासै रुची लागेको थिएन । चुनाव सफल गर्न भनेर प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले हाम्रा सयौँ जना कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, मुद्दा चलाउने र दमन गर्ने कार्य गर्‍यो । कैयौँ गाउँमा घेरा हाल्ने र खोजतलास गर्ने कार्य भयो । यसो त जनताको सत्ताले पनि केही खराब तत्वहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो । यसमा हामीलाई खासै चिन्ता छैन । क्रान्ति, क्रान्तिकारी शक्ति र जनतालाई दमन गर्नु प्रतिक्रियावादी, दलाल, संसद्वादी, पुँजीवादी, साम्राज्यवादीहरूको चरित्र नै हो । यद्यपि उनीहरूले संसद्वादभित्र विरोध गर्ने स्वतन्त्रताको कुरा केवल पुँजीवादी हितका लागि चलाइने बकबास मात्र हो भन्ने सहज बोध यसले गराउँछ । हामी क्रान्तिकारीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको दलाल पुँजीवादी राज्यलाई क्रान्तिद्वारा परास्त गर्ने र राज्यलाई वैज्ञानिक समाजवादमा पुर्‍याउने हो । हामीले त्यही गर्नुपर्छ ।
चुनाव बिथोल्ने क्रममा देशभर बम विस्फोटका घटना भए तर तपाईंहरूले बेलैमा जिम्मा लिनुभएन र त्यसले अन्योल निम्त्यायो भन्ने टिप्पणी छ नि ?
यो त जानीजानी लाज पचाउन चलाइएको प्रचार मात्र हो । यो जनताको विद्रोहलाई ‘जिम्मा’ को नाटक गरेर विवादित पार्ने बुर्जुवाहरूको खेल मात्र हो । प्रतिक्रियावादी चुनावलाई सम्पूर्ण शक्ति र सम्पूर्ण तरिकाद्वारा प्रतिरोध गर्ने, खारेज गर्ने र असफल गर्ने भनिसकेपछि जुलुस लाउँदै, जिम्मा लिँदै, भित्तेलेखन गर्दै जिम्मा लिँदै, दलाललाई लघार्दै जिम्मा लिँदै गर्नु पर्दैन । लाटोले पनि बुझेको सत्य हो चुनाव खारेजमा गरिएका प्रतिरोध कारबाहीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको हो । यसमा कोही पनि अन्योलमा छैन । कोही अन्योलमा छ भने कारबाहीको अन्योल होइन, आफ्नै अन्योल मनस्थिति मात्र हो ।
चुनावमा भएका विस्फोटका घटनमा तपाईंहरूको पार्टी र सीके राउतहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेरेको पाइयो । यथार्थ के हो ?
तपाईंको प्रश्नमा भनेजस्तो अवस्था होइन । क्रान्तिकारी शक्ति, श्रमिक जनता, सुरक्षा शक्ति (सेना, प्रहरी) राजनीतिक प्राणी कसैले पनि यस्तो सोचेका छैनन् । त्यो कसैले प्रचार गर्छ भने क्रान्तिको आँधीबाट भयभीत र आतङ्कित भएका लुच्चा, लुटेरा, दलाल र चाटुकारले मात्र भनेको छ । हामी वैज्ञानिक समाजवादका लागि लड्दैछौँ भन्ने सत्यबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैन ।
चुनावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेषगरी ईयूले गरेको टिप्पणीबारे केही प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ कि ?
ईयूले दिएको वक्तव्यले केही गम्भीर विषय व्यक्त गर्छ । पहिलो कुरा त ईयूले विश्व राजनीतिमा नेपालको सामरिक महत्वलाई बुझेको छ र सोहीअनुरूप आफूलाई नेपालमा सक्रिय सहभागी गराएको छ । दोस्रो, ईयू अहिले पनि एक साम्राज्यवादी, उत्तरसाम्राज्यवादी चरित्र भएको शक्ति हो । उसले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावभित्र पार्न चाहन्छ । नेपालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने निर्देशन दिन खोज्दैछ । तेस्रो, वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति भएका प्रतिरोध सङ्घर्षहरूलाई हिंसाको संज्ञा दिएर बेइमानी गरेको छ । यसभित्र उसको पुँजीवादी पक्षधरता प्रस्ट देखा पर्छ । हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ– नेपाली राजनीतिका नेतृत्वकर्ता र सञ्चालनकर्ता नेपालका राजनीतिक शक्ति हुन् र नेपाली जनता हुन् । यसमा ईयूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय चासो जनताको इच्छाअनुरूप राखोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
चुनाव खारेजपछि तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? आगामी कार्यक्रम त केही सार्वजनिक गर्नुभएको छैन नि ?
सम्भवतः चुनावपछि हामीेले सार्वजनिक गरेको वक्तव्य हेरिसक्नुभयो होला । त्यहाँ हामीले स्पष्ट गरेका छौँ– अब नेपाल ‘प्रतिरोध, विद्रोह, क्रान्ति र आमूल परिवर्तनको चरणमा’ प्रवेश गरेको छ । साथै पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जनताको बीचमा बसेर सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न भनिसकेका छौँ । त्यसैगरी जनता, बुद्धिजीवी, देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिहरूलाई सङ्घर्षमा साथ दिन अपिल गरेका छौँ । सङ्घर्ष अगाडि बढी पनि रहेका छन् । जहाँसम्म उच्च स्तरका नयाँ योजनाको विषय छ, केन्द्रीय समितिले छिट्टै लिएर आउनेछ ।
चुनावमै पनि व्यक्तिकेन्द्रित, उम्मेदवार लक्षित आक्रमण गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ त तपाईंहरूमाथि ?
हो, यो सही हो । यसो भनेर केही खराब र जासुस प्रकारका मान्छेले भनेजस्तो ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ भने होइन । हामीले केन्द्रीय समितिबाटै भनेका थियौँ– नेपालमा दलालहरू र नेपाली जनताका बीचको अन्तर्विराध आजको सबैभन्दा मुख्य सङ्घर्ष हो । दलाल भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा घुसेर विदेशी मालिकको इसरामा नेपालमा शासन गर्न खोज्ने दलाल, लुटेरा, जनघाती, राष्ट्रघाती, भ्रष्ट तत्वहरू हुन् । तीमध्ये राजनीतिक क्षेत्रका दलालसँग यो चुनावमा सङ्घर्ष परेको हो । यहाँ कस्ता खराब तत्व छन्, तपाईंहरू पनि जान्नुहुन्छ र आम जनताले पनि बुझेका छन् । यो चुनावमा देश बेच्ने, कर्णाली बेच्ने, अरुण बेच्ने, नेपालका उद्योगहरू बेचेर खाने, कमिसनको चक्करमा युवकयुवती बेच्ने, क्रान्ति बेचेर खाने, कतिसम्म भने जनमुक्ति सेनाको मासिक ५ हजार र दैनिक भत्ताबाट पनि कमिसन झिकेर अर्बौं रूपैयाँ खाने लिच्चडहरू छन् । यस्तालाई कारबाहीको सुरुआत मात्र भएको छ । यत्ति कारबाहीमा पनि जनता खुसी छन् । यिनलाई धुलो काढ्न त बाँकी नै छ । यी तत्वहरू व्यक्ति त हुन् तर सामान्य व्यक्ति नभएर राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्ट र विषालु व्यक्ति हुन् । यस्तालाई कारबाही गर्नु न्यायिक फैसला हो ।
एमाले–माके मिलेर निर्माण गरेको वाम गठबन्धनका बारेमा तपाईंहरूको दृष्टिकोण के हो ? यसले तपाईंहरूको आन्दोलनमा केही प्रभाव त पार्दैन ? उनीहरू पार्टीएकता गर्ने, स्थिर सरकार बनाउने, देशको विकास गर्ने कुरा गरिरहेका छन् त !
एमाले—माके गठबन्धन झापा विद्रोह र जनयुद्धबाट भागेका, पछि फर्केका, विचलित भएका, आत्मसमर्पण गरेका र वैज्ञानिक समाजवादको महान् आदर्शबाट च्यूत भएका आत्मसमर्पणवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी प्रवृत्तिहरूको गठजोड हो । यसमा पनि एमालेका केही आफ्नै विशेषता छन् । उसले पहिले वैचारिक, राजनीतिक संश्लेषण (बहुदलीय जनवाद) गरेर अलि लामै समयदेखि संसद्वादमा प्रवेश गराएको छ । माके र त्यसका भगौडाहरूको शरीरमा त सहिदहरूको रगतका दाग पनि मेटिएका छैनन् । यो त एमालेलाई प्रतिक्रियावादी घोषणा गरेर सफाया गर्नुपर्छ भन्ने अनैतिकहरूको हूल हो । जनयुद्ध बेचेर खाने अधमहरूलाई के भन्ने ! यो कसरी ‘वाम’ हुन्छ ! यो त कम्युनिस्ट चिह्न प्रयोग गरेको नवपुँजीवादी समूह हो । यस प्रवृत्तिलाई हामीले नयाँ उचाइमा संश्लेषण गर्दै ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी’ भन्ने सोचेका छौँ ।
एमाले—माके गठबन्धनले हाम्रो पार्टी र क्रान्तिलाई असर त गर्छ तर सकारात्मक असर गर्छ । उनीहरू पुँजीवादी संसद्वादमा पतन भएका तत्व हुन् र क्रान्ति आवश्यक छ भनेर त हामीले प्रचण्ड—बाबुरामको आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादबाट विद्रोह गरका हौँ । त्यही पुष्टि भएको छ भने हामीलाई यसले सही साबित गर्छ र जनता उनीहरूबाट झन् धेरै स्पष्ट बन्नेछन्, बन्नुपर्छ । परिवर्तन र क्रान्तिका पक्षमा रहेका जनताले हामीलाई नै साथ दिनेछन् । जहाँसम्म एमाले—माकेले विकास र समृद्धिको प्रचार गरेका छन् यो प्रचार पानीको फोका हो । जसरी क्रान्ति सकियो र आवश्यक छैन भन्ने प्रचारले हावा खायो त्यसैगरी यो प्रचारले पनि छिट्टै असफलता बेहोर्नुपर्छ । किनकि जुन बेलासम्म दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता कायम हुन्छ त्यहाँ जनताको समृद्धिको सम्भावना हुँदैन । त्यहाँ त दलालहरूको लुटतन्त्र चल्छ । समृद्धि भए पनि दलाल र लुटेरा वर्गको मात्र समृद्धि हुन्छ । तपाईंले चुनावको परिणामपछि देख्नुभयो नि, पद, कुर्सी र सुविधाका लागि उनीहरू कति छुद्र बकबास गर्दै हिँडेका छन् । कसैको कुरा कसैसँग मिलिरहेको छैन । अनि यी तत्वबाट देश उँभो लाग्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ? अहँ यो नचिताए हुन्छ । यत्ति हो, उनीहरूले वैज्ञानिक समाजवादमा जाने आधार भने बनाइदिनेछन् ।
वाम गठबन्धनले चुनावकै बाटोबाट समाजवाद स्थापना गर्ने तहसम्म जाने बताइरहेको अवस्थामा समाजवाद स्थापना गर्न अवैधानिक कार्यक्रम र बाटो नै रोज्नुपर्ने बाध्यता के प¥यो तपाईंहरूलाई ?
संशोधनवाद, संसद्वाद र आत्मसमर्पणवादले दुनियाँमा कहिल्यै पनि वैज्ञानिक समाजवाद ल्याएको इतिहास छैन र हुने पनि छैन । संसद् र पुँजीवादी संस्थाभित्रबाट भाषण र प्रचार गरेर कहिल्यै पनि वैज्ञानिक समाजवाद पैदा हुनेछैन । संशोधनवादको कोख समाजवादी कोख होइन, त्यो पुँजीवादी कोख हो जहाँबाट वैज्ञानिक समाजवादलाई निषेध गर्ने जण्ड पुँजीवादको जन्म हुन्छ । केपीले समाजवाद जन्माउन खोजेर के हुन्थ्यो ? केपीको कोखमा पुँजीवादको गर्भ छ, त्यही जन्मिन्छ । प्रचण्डको त त्यो पनि छैन । त्यो त बाँझो छ ! जहाँसम्म हामीले अवैधानिक बाटो रोज्यौँ भन्ने प्रश्न छ, यो मिलेन । हामीले रोजेको बाटो नै जनताको इच्छाअनुरूपको वैध बाटो हो । यो बाटो प्रतिरोध र विद्रोहको बाटो भने हो । यसको बाध्यता पुँजीवादी राज्यसत्ता, दलाल संसदीय व्यवस्थाको कारणले पैदा भयो । उनीहरू जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई सखाप पार्न चाहन्छन्; जनयुद्धका योद्धाहरूलाई अपराधी बनाउन चाहन्छन्; नेपालबाट कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन चाहन्छन्; बन्दुकको नालमा शासन गर्न चाहन्छन् अनि हामीले कसरी उनीहरूलाई फूलपाती र गङ्गाजल छर्किन सक्छौँ ! यो हामीले नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध गरेको प्रतिरोध र विद्रोह हो जो जनताको मतद्वारा अनुमोदित छ ।
तपाईंहरूले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, मालेमामा विकास र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाबारे, तपाईंहरूको कार्यक्रमबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र आलोचनासमेत भइरहेको छ नि ? कसरी प्रस्र्याउनुहुन्छ ती विषय ?
राम्रो प्रश्न हो यो । निश्चय नै हाम्रो पार्टीले ऐतिहासिक आठौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशालाई ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भनेर संश्लेषण गरेको छ र यसको प्रयोग पनि सानदार ढङ्गले गरिरहेका छौँ । हामीले यो कार्यदिशाको संश्लेषण गर्दा नेपाली अर्थराजनीतिक सम्बन्ध र विशेषताहरूलाई मात्र होइन, एक हदसम्म विश्व अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई समेत अध्ययन गरेर, ती विषयमा पचाएर गरेका छौँ । यो कार्यदिशाको संश्लेषण त्यत्तिकै आवश्यक र वैज्ञानिक छ जति आवश्यकता क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको रहेको छ । यसप्रति हामीलाई त्यत्तिकै विश्वास छ जति विश्वास माक्र्सवादमा छ । यो नै आजको वैज्ञानिक र वस्तुवादी कार्यदिशा हो । यो लेनिनको जनविद्रोह र माओको दीर्घकालिन जनयुद्धको उच्च संश्लेषण हो ।
यसप्रति आलोचना हुने कुरा स्वाभाविक हो । माक्र्सवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा त पुँजीवादी र संशोधनवादीहरूबाट आलोचना छ भने हाम्रो नयाँ संश्लेषणमा आलोचना हुने कुरालाई अनौठो मान्ने कुरा केही छैन । विज्ञानको नियम नै यस्तो छ हजारौँ आलोचनाहरू झेलेर मात्र खरो उत्रिन्छ । तर यसको गहिराइ, व्यापकता र गाम्भीर्यलाई नबुझेर पूर्वाग्रह, सङ्कीर्णता, रूढिवाद, ईष्र्या, कुण्ठा, छाडा एवम् आवारा तरिकाले गर्ने आलोचनाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । त्यता आलोचनालाई क्रान्तिको धारमा रेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सही विचार क्रान्तिको महायात्राबाट साबित हुन्छ । हाम्रो ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ वैज्ञानिक छ र यो साबित भइछाड्नेछ ।
एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गर्दा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र मित्र शक्तिहरूलाई कसरी सहकार्यमा राख्नुहुन्छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र मित्र शक्तिहरूलाई सहकार्यमा राख्ने हाम्रा तीनवटा प्रस्ट नीतिहरू छन् र ती नीतिलाई हामी लागू गरेर जान्छौँ ।पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीसँग क्रान्तिमा अगाडि बढ्न चाहने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गरेर जाने, दोस्रो, तत्काल एकता हुन नसके पनि राष्ट्रियता र जनअधिकारका पक्षमा विषय मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने, तेस्रो, देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको राज्यसत्ता र राजनीतिक अग्रगमनका लागि राजनीतिक मोर्चामा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर जाने । कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई यथास्थिति र अग्रगमनका पक्षमा व्यापक धु्रवीकरण गर्ने हाम्रो सोचाइ छ । यसका पक्षमा विभिन्न नेता र शक्तिहरूसँग छलफल चली पनि रहेको छ । नेपालमा एकपटक सोचेको भन्दा नयाँ र उच्च स्तरमा नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरण र सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने अवस्था देखा पर्दैछ ।
तपाईंहरू क्रान्ति गर्दा अब नेपाली सेनाले दलालहरूका विरुद्ध हामीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ, के त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ र ?
हो, हामी त्यो सम्भावना देख्छौँ र त्यसो होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हाम्रो पार्टीले भनेको छ– नेपाल देशको स्वाधीनता सर्वाधिक जोखिममा छ । जनताको जीवन गरिबीको मारमा पर्दै गएको छ । भरखरै प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालमा गरिबी झन् बढेको छ । युवकयुवतीको हालत के छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । देशलाई यस्तो हालतमा पु¥याउने बदमासहरू यिनै संसद्वादी दलका दलाल नेताहरू हुन् । हामीले देशलाई यी तत्वहरूबाट मुक्त नगरेसम्म जनताको अवस्था माथि उठ्नेछैन । त्यसका लागि हामी दलाललाई फाल्ने क्रान्ति त गर्छौंगर्छौं, त्यसलाई बचाउन र हामीमाथि दमन गर्न नेपाली सेना र प्रहरी आउनु हुँदैन, बरु सबै मिलेर यिनलाई फालौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ । यो सोचाइप्रति सुरक्षा शक्ति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण हामी देख्दैनौँ । त्यस अर्थमा यो सम्भव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो अवस्था र तपाईंहरूको कम्युनिस्ट भाइचाराका बारेमा सङ्क्षेपमा केही राखिदिनुस् न !
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था राजनीतिक दृष्टिले एकदमै राम्रो भन्ने ठाउँमा छैन तर विचारधारात्मक रूपले आज पनि यो महान् सत्यका रूपमा स्थापित छ । आज पुँजीवाद हाबी छ तर पुँजीवाद हाबी हुँदै गर्दा पैदा हुने यसको पागलपन र लुटेरा चरित्रले वैज्ञानिक साम्यवादको सम्भावनालाई दुरुस्त प्रकारले अगाडि ल्याइदिन्छ । आज पुँजीवादको लुटेरा चरित्र विश्वव्यापी रूपमा सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको छ । संसारभरि जता पनि युद्ध र अराजकताको स्थिति बढ्दैछ, विध्वंशकारी हातहतियारको होडबाजी, खरिदबिक्री र प्रयोग बढ्दै गएको छ । यसले आउँदो समयमा वैज्ञानिक समाजवाद—साम्यवादलाई अनिवार्य रूपले अगाडि ल्याउनेछ ।
हामी विश्वका क्रान्तिकारी र सङ्घर्षरत कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध र मोर्चाबद्ध गराउनमा लागिरहेका छौँ । यस क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति पनि भइरहेको छ । कम्तीमा पनि पुँजीवादका विरुद्ध क्रान्ति र सङ्घर्षमा रहिरहेका कम्युनिस्टहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सक्दा शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ । विभिन्न देशका माओवादी पार्टीहरूसँग त हाम्रो संवाद चली नै रहेको छ । दिन प्रतिदिन विस्फोटक बन्दै गएको विश्व राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूले कम्युनिस्टहरूलाई सहकार्यमा आउने वातावरण बन्दै जानेछ ।
प्यालेस्टिन–इजरायल तनाव र जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी स्वीकार्ने अमेरिकी निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जेरुसेलम प्यालेस्टाइनको भूभाग हो भन्नेमा विश्व समुदाय एकमत छ । सम्भवतः अमेरिकी नागरिकहरू पनि यसै पक्षमा छन् । जहाँसम्म इजरायलले कब्जा गरेको प्रश्न छ यो सही छैन भन्नेमा पनि विश्व एक छ । हालै बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महसभाले अमेरिकी धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै अत्यधिक वहुमतले अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो । कब्जालाई विवादित भन्न पनि मिल्दैन, यो जसको हो उसैको हुनुपर्छ । अनौठो घटना ! अमेरिकाले इजरायलको राजधानी घोषणा गरिदिने मूर्खतापूर्ण कार्य गरेको छ । एउटा देशको राजधानी अर्कोले तोकिदिने ! योजस्तो बलमिच्याइँ अरू के हुनसक्छ ? सायद इजरायलले समेत कम सोचेको निर्णय होलाजस्तो लाग्छ । अमेरिकी यो निर्णयले विश्व पुँजीवादको नयाँ चरित्र र अन्तर्विरोधलाई प्रकट गर्छ । हामीले यसै भएर आजको पुँजीवादलाई साम्राज्यवाद—उत्तरसाम्राज्यवाद भन्ने निर्णय गरेका छौँ । यो अति र चरम रूपमा व्यक्त भइरहेको छ । सम्भवतः यो निर्णय विश्वलाई आफ्नो दबाबमा राख्ने नियतसँग जोडिएको छ । हाम्रो विचारमा अमेरिका यो निर्णयबाट पछि फर्किनुपर्छ र विश्वले यसको सही जबाफ दिनुपर्छ ।
अमेरिकाले जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया) सँग निःसर्त वार्ताको प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ आएको छ । के अमेरिका गल्दै गएको हो कोरियासँग ?
विषय ठिकै भन्नुभयो तर उत्तरकोरियासँग अमेरिका गलिसक्यो पनि नभनौँ । कुरा के सत्य हो भने प्रतिरोध, स्वाधीनता र प्रगतिसहितको आत्मरक्षा भन्ने दृष्टिकोण नै पुँजीवादसँगको प्रतिस्पर्धामा वैज्ञानिक र वस्तुवादी दृष्टिकोण हो । उत्तरकोरिया यसैको नमुना हो । जहाँ प्रतिरोध र स्वाभिमान छ त्यहाँ मात्र रक्षा र उन्नति सम्भव छ । जहाँ आत्मसमर्पण र दलालीगिरी हुन्छ त्यसको पतन र विनाश अनिवार्य छ । उत्तरकोरियाले पुँजीवादलाई परास्त गर्दैनथ्यो र वैज्ञानिक समाजवादी मार्ग पकड्दैनथ्यो भने, कोरियाले अमेरिकाविरुद्ध प्रतिरोधको बाटो लिँदैनथ्यो भने उत्तरकोरियाको हालत पूर्वी जर्मनीकै जस्तो हुन्थ्यो । तर उत्तरकोरियाले सही बाटो लिएपछि अमेरिका पछि हट्न बाध्य भएको छ । अमेरिकाले निःसर्त वार्ताको प्रस्ताव गरेको कुरा हामीले पनि पायौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि वार्ता गर्ने भन्यो ।यसभित्र अमेरिकाका अनेकौँ दाउ भए पनि उत्तरकोरिया र उत्तरकोरियाली जनताको एक तहको विजय हो । यसले उत्तरकोरियालाई मिच्न वा हमला गर्न सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश गएको छ । यसो त यो उत्तरकोरियाको मात्र विषय नभएर विश्व जनमतको अभिव्यक्ति पनि हो ।
रातो खबरबाट ।
जनयुद्ध दिवस मनाउँदै एकीकृत जनक्रान्तिको महान् यात्रालाई अरू प्रज्वलित बनाऔँ- विप्लव
माघी पर्व र यसको महत्त्व, वैज्ञानिकता र अहिलेकाे अवस्थाबारे मंगल प्रसाद चाैधरीकाे विशेष अन्तर्वार्ता
राजनीतिका कारण दाङमा जेल पर्ने पहिलो महिला कृष्णा सुवेदीसँगकाे विशेष अन्तरवार्ता
एमसीसीविरुद्धकाे संघर्ष अन्तर्गत देशव्यापी एमसीसी सम्झौता पत्र जले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टी निकट युवा संगठन
नेपालमा काेराेना संक्रमितको संख्या १८११ पुग्यो
नेपालमा अाज थप २३९ जनामा काेराेना भाइरस संक्रमण
नेपालगञ्जबाट दाङतर्फ अाइरहेकाे बस दुर्घटना हुदा ११ जनाको मृत्यु, २२ जना घाइते
नेपालगञ्जबाट दाङतर्फ अाउँदै गरेको मिनीबस दुर्घटना हुदा ११
नेपालमा २४ घन्टामा १६६ कोरोना संक्रमित थपिए
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १६६ कोरोनाभाइरसका संक्रमित थपिएका
एमसीसी पास नगर्न भन्दै विप्लवद्वारा सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती आपराधिक
राष्ट्रियताको लडाइँमा युवा विद्यार्थीहरुकाे अहिलेको आवश्यकता
अहिले वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिको मिलिमतोमा नेपालमा विविध नाजायज
रुकुम हत्याकाण्ड जातीय नरसंहार भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा दुःख व्यक्त
राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीआर) ले रुकुमपश्चिममा जातीय
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक–भौतिक सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने निर्णयको १० विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा विरोध
सत्ताइतरका विभिन्न दस विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारले हालै गरेको
१७ जेठ । सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने
नेपालमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, मृतकको संख्या ७ पुग्यो
दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका –७ मा निर्माण गरिएको
सूचना विभाग दर्ता नं. ९७३/०७५-७६
सञ्चालक/सम्पादक :- जानकी चौधरी
इच्छुक मिडिया प्रा.लि.
घोराही १५- दाङ
फोन नं :- ९८४७९४२१०९
© 2017 Dang Sandesh All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology